Mialy Rajoelina: actions à Antalaha, début octobre 2012 - Le blog de fitia-madagascar.over-blog.net
<< Antalaha: Maison des Jeunes... L'association Fitia: actions... >>
Mialy Rajoelina: actions à Antalaha, début octobre 2012
FIZARANA KITS SCOLARES TAO ANTALAHA, FIANDOHAN'NY VOLANA OKTOBRA 2012
Nanampy ireo ankizy amin’izao fanombohan’ny taom-pianarana izao ny fikambanana Fitia tarihin’i Mialy Rajoelina. Isan’ny nahazo anjara manokana tamin’izany ireo zanaky ny boka ao Bel Fort village Antalaha. Sekoly Ezaka niforona tamin’ny 1998 ity sekoly natokana ho an’ny zanaky ny boka ity. “Voailikilika ireo boka ka ny fahitana izany no nahatonga anay hamorona ity vohitra Bel Fort ity. Taty aoriana koa anefa tsy nisy sekoly nety nandray ny zanak’izy ireo ka nahatonga ihany koa ny fanorenana ny sekoly”, araka ny nambaran’I Marie Hèlene Cam-Hyo, avy amin’ny Fikambanana Cala sady Filoha mpanorona ny Bel Fort village sy ny sekoly Ezaka.
“16 no isan’ny mpianatra tamin’ny voalohany, saingy efa 246 izy ireo amin’izao fotoana. Sekoly efa misokatra ihany koa amin’ny ankizy hafa manodidina satria efa sitrana ireo boka ireo ary tsy mamindra intsony”, hoy kosa Olivia Talen’ny Sekoly ezaka.
Mpianatra manodidina ny 246 tao amin’ity sekoly ity no nahazo fitaovam-pianarana maimaimpoana. Kitapo, kahie, penina, “trousse”, ary sakafo ho an’ny “cantine scolaire”. Tsy diso anjara ihany koa ireo ray aman-dreny boka mipetraka ao an-toerana. Notolorana “chauffe-eau solaire”, lay misy ody moka izy ireo ary nahazo fitaovana entina manamboatra ny toeram-pivoahana kosa ny sekoly.Ny “chauffe eau solaire” moa izay ilain’ireo olona mararin’ny habokana.
“Mampihetsi-po sady mendri-pisaorana ny fahenoana ny tantaran’ny sekoly sy ny Tanàna. Isaorana Marie Hèlene amin’ny zavatra efa vitany. Ny tanjon’ny Fikambanana Fitia moa dia manampy ny tanora sy ny ankizy ary ny vehivavy. Naheno ny zava-misy eto amin’ny sekoly izahay ka tsy nisalasala nanantona sy nanampy. Hanamaivanana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny sy hamporisihina ny ankizy hilofo amin’ny fianarana no tena tanjona”, araka ny kabarin’i Mialy Rajoelina, Filoha Mpanorina ny Fikambanana Fitia. Nanentana ireo ray aman-dreny ihany koa izy amin’ny handefasana ny ankizy mianatra.
Mpianatra amin’ny Ceg Antseranambidy, kaominina Ampahana, tsy lavitra ny misy ny Bel Fort Village ihany koa no nahazo tamin’ny fitaovam-pianarana avy amin’ny Fikambanana Fitia. “Sakana tsy andehanan’ny ankizy mianatra eto aminay ny tsy fahafahan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra mandoa ny latsakemboky ny mpampianatra Fram. Misy mpampianatra 11 izy ireo izay handoavan’ny ray aman-dreny Ar 43 000 isaky ny mpianatra”, araka ny fitarainan’I Velonjara Raymond, Talen’ny Ceg. “Ho ezahina hampitaina amin’ny tompon’andraikitra ny hetahetanareo. Mino aho fa tsy hijery fotsiny ny olan’ireo mpampianatra ny Fanjakana. Mirary anareo ankizy kosa hazoto hianatra”, hoy Mialy Rajoelina.
Nolalovan’ny Fikambanana Fitia ihany koa tao amin’ny fokontany Maevadoany nizarana lay misy ody moka ho an’ireo vehivavy rehetra ao amin’ny fokontany. “Mba ahafahanareo miaro tena amin’ny tazomoka no anton’izao indrindra ireo vehivavy bevohoka”, hoy hatrany Mialy Rajoelina.